EyoMsintsi 5, 2018 admin
CEO Twitter uxelela Congress loo nto ngokuxilonga blockchain ukulwa maqhinga
CEO Twitter Jack Dorsey waxelela ikomiti ngoLwesithathu ukuba inkampani media liphonononga izisombululo blockchain ukuba platform yayo. Dorsey ephendula umbuzo ovela yaBameli California ngexesha kwetyala Amandla Commerce swi umsebenzisi wabucala ukhuselo, okungamanga, ukumodareyitha umxholo icala izityholo nxamnye babebambelele yezopolitiko on Twitter.
Matsui wabuza: “Ziziphi izicelo ezinokuba ngaba ubona ukuba blockchain?” Dorsey waphendula “kufuneka ukuba siqale neengxaki sizama ukuyisombulula kubathengi bethu ujonge konke ithekhinoloji ekhoyo… Blockchain yileyo ndicinga ukuba unalo kakhulu intalente, ngokungqalileyo emhlabeni kwasasazwa ukuthembana kwaye zasasazwa nokunyanzeliswa. Siye Aninyukanga nzulu Ndingathanda nje kodwa ekuqondeni indlela kanjani lo bugcisa ku Twitter kodwa sibe bantu sicinga ngayo namhlanje.”
EU kufuneka basebenzise imithetho cryptocurrency eqhelekileyo, njengako ingxelo ukuba abalungiseleli
Itanki ucinga Belgium-based ubhekisa ukuba EU kufuneka ukudala umgangatho omnye imithetho cryptocurrency kwingxelo ithunyelwe ukuhlawulela abalungiseleli ngaphakathi ibloko kwezoqoqosho. Bruegel, ezinze e Brussels, esakhiweni Belgian, ukholelwa ukuba izidingo EU “imithetho eqhelekileyo” ku cryptocurrencies, kwakunye nendlela iimpawu eyabiwa wasebenza. Ingxelo It bufika ngaphambi i “intlanganiso sesikweni imicimbi yezoqoqosho kunye yemali ngabalungiseleli” kamva kule veki. Le ngxelo engekafumaneki esidlangalaleni.
Le ngxelo ithi EU kufuneka ukunyanzelisa imigaqo eqhelekileyo xa ukutshintshiselana crypto kunye neminikelo kokuqala lwemali (ICOs) njengokuba. Oku sekuthethekile, ingxelo ithi indalo amagunya Bitcoin bukhanyisa elawula cryptocurrency ngokwayo “akunakwenzeka.” Njenge, ukuba igxininiswe into yokuba nayiphi na imigaqo kuya kufuneka ukuba isicelo amaziko efoni okanye ezinye iinkampani ezinxulumene. Kwakhona likhulu wokulwa China phezu cryptominers, siphawula ukuba iifama zemigodi unako ivalwe ngokunjalo.
Goldman Sachs uwisa izicwangciso zorhwebo Bitcoin okwangoku
Goldman Sachs ke ditching izicwangciso ukuvula edesikeni ukuba cryptocurrencies urhwebo njengoko sikhokelo olawulo crypto akukacaci, ngokutsho kubantu eziqhelekileyo lo mbandela. Kwiveki nje, Goldman eziphezulu ziye zagqiba ukuba amanyathelo ezininzi ekufuneka ethathiwe, uninzi lwabo ngaphandle kolawulo yebhanki, phambi kokuba ibhanki olulawulwayo baya kuvunyelwa ukuba lokuthengisa cryptocurrencies.
Goldman Sachs Isithethi Michael DuVally wathi: "Ngeli xesha, khange sifike isiphelo phezu ububanzi yedijithali umnikelo wethu asethi.”
imigodi Crypto yamkelwe neshishini ngabasemagunyeni Iranian
urhulumente Iran iye yamkelwe imigodi crypto neshishini, unobhala Iran i-Internet yeBhunga Abolhassan Firoozabadi uthe emigodini cryptocurrencies ezifana Bitcoin sele uphunyeziwe ngokusesikweni kwishishini ngabasemagunyeni karhulumende. kunjalo, umthetho esemthethweni ngokuvula i-sikhokelo esemthethweni kolu shishino iye kodwa ukuba ingangeniswa lizwe.
Firoozabadi lathi Iran National Internet Centre liphuhlisa ngendawo cryptocurrency imigodi ummiselo. kuthiwa Unobhala ibango ukuba kwaziswa abasemagunyeni abafanelekileyo uya kuqalisa isicwangciso olawulo zokuqala ezinxulumene-crypto kunye iifem ekupheleni kuka Septemba.
Ingxelo Daily Market Kraken for 04.09.2018
$96.6M wasebenza kuzo zonke iimarike namhlanje